I-SYTYCD'S DEREK PIQUETTE EMANGALISA EP ENGAGEMENT - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato I-SYTYCD's UDerek Piquette kunye noMitchell Jackson bayabandakanyeka: Bona Iifoto zabo eziBalaseleyo zeParis
I-SYTYCD's UDerek Piquette kunye noMitchell Jackson bayabandakanyeka: Bona Iifoto zabo eziBalaseleyo zeParis
UMitchell Jackson kunye noDerek Piquette bazibandakanya xa bekwiholide eParis. Ityala: UGonçalo Silva woFlytographer
Ngu: Kaitlin Jones 01/07/2016 ngo-1: 02 PM
UDerek Piquette, ngumdanisi ophambili kwi-10 Ke ucinga ukuba ungaDanisa Ixesha le-12 lithembisene nesoka lakhe uMitchell Jackson kwezona ndawo zothando-eParis, eFrance! UDerek noMitchell babelane kuphela ngebali labo ngeNqaku, ke jonga iifoto zabo ezintle zokuzibandakanya eParis apha ngezantsi kwaye ubone ukuba SYTYCD isindululo sothando senkwenkwezi saba!
apho unokuthenga khona iilokhwe zomtshato ezisetyenzisiweyo
KwakungoDisemba 31, 2015, uEva woNyaka oMtsha, ukuba uMitchell wacebisa uDerek eParis. UMitchell wabelane no-Knot wayecwangcise isindululo ukusukela ngoMeyi kodwa kwafuneka afumane iindlela ezikrelekrele zokwenza izimvo zakhe zokuzibandakanya kwilizwe liphela ngaphandle kokonakalisa isimanga.
Ndisazi ukuba ndifuna ukuyenza eParis ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndinike uDerek ukuba njengesipho somhla wokuzalwa kwakhe ukuze ungathandabuzi, utshilo uMitchell. Emva koko ndaqala ukuyila umsesane wakhe. Emva kwenyanga yohlengahlengiso oluthile ekugqibeleni ndenza umsesane ogqibeleleyo kaDerek.
Ukuqhubeka nokugcina ukukrokrela, uMitchell uxelele i-Knot ukuba wafumana umhlobo wakhe osenyongweni wokufumana umfoti wasePortugal UGonçalo Silva ye Flytographer kunye nesipho esi sibini sifota eParis njengesipho seKrisimesi. Kuzo zonke izinto zikaDerek ezazisazi, uGonçalo wayekhona nje ukubamba amaxesha abo oNyaka oMtsha waseParis non-selfie!
Kuqala waguqa phantsi…
Ifoto eposwe nguDerek Jackson-Piquette (@derekpiquette) ngo-Dec 31, 2015 ngo-9: 45 kusasa PST
UDerek wayengenalo nofifi, uMitchell uxelela i-Knot, kodwa sathi sakufika kudubulo emva kwesithathu, ndaguqa ngedolo ndacebisa. Emva koko sagqiba usuku lonke eParis. Kwakuyi-New Year Eve efanelekileyo.
Kuqala waguqa ngamadolo… UDerek wachaza umfanekiso wakhe woNyaka oMtsha kaEva ngefoto, etyhila ukuzibandakanya kwabo kuye SYTYCD abalandeli. UGonçalo wasenza kakuhle esi sibini, wabamba uMitchell ecebisa ngeLa Pont Alexandre The New Bridge, weba ingqalelo kude ne-Eiffel Tower emi mgama.
… Emva koko ndathi EWE!
Ifoto ethunyelwe nguDerek Jackson-Piquette (@derekpiquette) nge-31 kaDisemba 2015 ngo-9: 46 kusasa PST
… Emva koko ndathi EWE! UDerek wagqibezela iseti yemifanekiso yesindululo saseParis ngokwabelana ngefoto yabo babini beba ukwanga. Kwifoto uDerek ubonakalisa iringi yakhe entle yokuzibandakanya nedayimani ngaphezulu kwe-3 carats yedayimane kunye nebhendi emhlophe yegolide awayenzileyo uMitchell kuye!
Ngomzuzu andinakuthetha nto ngaphandle kokuba 'Oo Thixo wam' ngelixa iinyembezi zigcwalise amehlo am, uDerek uxelela i-Knot. Bendihleli ndihlekisa ngokufuna ukuzibandakanya ngokwenyani ukusukela oko sadibana, ke ngoku ukuba ibisenzeka ngenene andizange ndikholelwe.
Ukutsiba kwi-2016 njengo… # nye # 2016 #paris
Ifoto ethunyelwe ngu-MITCHELL PIQUETTE JACKSON (@mitchjacks) ngo-Dec 31, 2015 ngo-6: 15 pm PST
Abadanisi bobungcali basebenzise intsalela yeholide yabo yoNyaka oMtsha kulonwabo olusandul 'ukuzibandakanya, bonwabela yonke into enikelwa sisiXeko sokuKhanya. Apha baboniswe betsiba bangena kwi-2016 phambi kwegalari eyaziwayo yeLouvre, equlathe phakathi kwezinye izinto zobugcisa ezixabisekileyo uLeonard Da Vinci UMona Lisa .
Mholo ngalentsasa!!! Usuku lweParis 3! #paris
Ifoto ethunyelwe nguMITCHELL PIQUETTE JACKSON (@mitchjacks) ngoJan 2, 2016 ngo-2: 11 kusasa PST
Nangona yayiluthando ekuboneni kuqala I-SYTYCD's UDerek, uMitchell wayefuna ixesha elongezelelekileyo lokuqonda into ephambi kwakhe. Aba babini badibana xa uDerek ebuzwa ukuba abe ngumdanisi ongumgaqo kunye nomhlobo osenyongweni kaMitchell kumboniso wenkampani oboniswe yiBridge To Artist Dance Inkampani eToronto, uDerek uxelele iKnot.
Emva komboniso saziswa kwaye uMitchell wayengenamdla… kwaphela, uDerek wachaza, kodwa kuphela kwiintsuku ezimbalwa kamva badityaniswa kwakhona komnye umsitho. Ngeli xesha eneneni uye waxoxa nam kwaye ndamfumana ukuba andinike inombolo yakhe.
Ngothando kwibhulorho yothando ❤️
Ifoto ethunyelwe nguMITCHELL PIQUETTE JACKSON (@mitchjacks) ngoJan 4, 2016 ngo-7: 10 kusasa kwi-PST
Ngokuhamba kukaDerek efundisa iiklasi zocweyo eDetroit kwiveki kamva, into ethile yaxelela uMitchell ukuba kufuneka abekhona naye. Emva kokuthetha ngale veki, wagqiba kwelokuba aqhube ngqo evela emsebenzini, iiyure ze-4 zokundikhuphela ngaphandle kwesidlo sangokuhlwa emva koko ndiqhube iiyure ezi-4 ukubuyela ngqo emsebenzini, uDerek wabelane neKnot. Uthe wayengazi ukuba kutheni kodwa waziva ngathi kufuneka eze kundibona.
Ukuboniswa apha ngothando kwibhulorho yothando, kuyacaca ukubona ukuba yintoni edibanise aba babini!
Uthando lwebhulorho yokutshixa 🇫🇷
Ifoto eposwe nguDerek Jackson-Piquette (@derekpiquette) ngoJan 4, 2016 ngo-7: 43 kusasa PST
Malunga neeveki ezimbini emva koko ndibuyele eToronto ndayokuhlala naye kwaye ndenza inkampani yakhe, Phantsi [for] Ubusuku beGala kwiSibhedlele seSickKids [Isibhedlele saBantwana abaGulayo], uDerek wabelane neKnot. Ngeli veki sawela entloko.
ulungiselelwa njani ukwenza imitshato
Ukuchitha nje iveki enye ngaphandle kwe SYTYCD ogqwesileyo o-10 uthe, sobabini sasingathandi ukwenza yonke into 'yomgama omde', ke kwiveki elandelayo ndaye ndagqiba kwelokuba ndiye kuhlala naye. Siye sahlala kunye ukusukela kwaye ngowona nyaka umyoli kunye nesiqingatha sobomi bethu. Elinjani ukuba libali!
Omnye wemifanekiso yam ethandekayo kwifoto yethu eParis! Ngokuqinisekileyo lolona hambo lubalaseleyo ebomini bam❤️
Ifoto eposwe nguMITCHELL PIQUETTE JACKSON (@mitchjacks) ngoJan 5, 2016 ngo-5: 54 pm PST
Ngomnye umfanekiso omangalisayo ovela kuGonçalo uMitchell awabelana ngawo nge-Instagram, uMitchell uyancuma kwikhamera ngelixa uDerek emanga esidleleni. Ngeengalo zikaDerek ezisongele isithandwa sakhe esitsha iringi yokuzibandakanya eqaqambileyo ikhanya ekukhanyeni. UMitchell ubhale umfanekiso, Enye yeefoto zam kwifoto yethu eParis! Ngokuqinisekileyo lolona hambo lubalaseleyo ebomini bam.
Nditshatile !!?! Ngcwele
-Derek Piquette (@derekpiquette) NgoJanuwari 6, 2016
Nangona SYTYCD inkwenkwezi isabonakala yothukile emva kokumangaliswa kokuzibandakanya eParis- kutshanje i-tweeting, ndisebenza ngokwenene !!?! -UDerek uxelele i-Knot, andikaze ndibenamathandabuzo ukusukela ngala mhla ndadibana naye, ukuba ndiya kuba naye ubomi bam bonke, kwaye ngoku ndiya kuba.
Esi sibini siqhutywa ngumnyhadala siba nexesha elininzi lokuqinisa izicwangciso zomtshato, kodwa kwabelwana ngeKnot, Sinethemba lokuyenza kwiVineyard eNiagara ehlotyeni lika-2017. Okwangoku uDerek unokubonakala esenza kwi-2015 SYTYCD UMdaniso woKhenketho ngelixa uMitchell exakekile edala kwaye elawula inkampani yakhe entsha yomdaniso kunye nokhuphiswano kuMgangatho.
Enkosi ngokwabelana ngobuhle bakho eParis kunye nebali lakho elikhuthazayo lothando kunye neNqaku, kwaye ndiyavuyisana nani nobabini!
Unokuba ngumphathi kanjani eCalifornia
ngubani ohlawula umtshato
iikhabhathi zasekhitshini ezimhlophe zeediliya
Isipho sokukhumbula unyaka we-13 kuye
Abafazi abathandana nomyeni kufuneka bazifumane nini iilokhwe zabo